Waa maxay TIN iyo APR: fikradeeda, halkee lagu isticmaalaa iyo in ka badan | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Waa maxay TIN iyo APR
Waxaa jira waqtiyo aan isku khaldami karno ereyada maaliyadeed, ee aan ujeedo ulaheyn, laakiin aan u maleyno inay yihiin laba fikradood oo micnahoodu yahay isku wax ama in si khaldan loo tarjumay (inkasta oo ay aad muhiim u yihiin). Taasi waa waxa ku dhaca TIN iyo APR.
Haddii aad rabto runtii ogow waxa TIN iyo APR yihiin, farqiga u dhexeeya labadan fikradood, oo baro sababta ay muhiim u yihiin waana inaad tixgelisaa, markaa qodobkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad fikradaha aad u sii caddeyso.
1 Waa maxay TIN
1.1 Sidee loo xisaabiyaa TIN
2 Waa maxay APR
2.1 Sidee APR loo xisaabiyaa
3 Maxay ku kala duwan yihiin TIN iyo APR
3.1 Qaabka loo xisaabiyo
Waa maxay TIN
Markay tahay fahamka fikradahan, waa inaad maskaxda ku haysaa inaan ka hadlayno laba fikradood oo la adeegsado, gaar ahaan marka la qiimeynayo iyo / ama la codsanayo amaah. Taasi waa sababta ay aad muhiim ugu yihiin, maadaama qaar badani u muuqdaan kuwo isku dhex yaacsan, ama aan siinayn muhiimada ay leeyihiin. Sidaa darteed, waa inaad si fiican u ogaataa waxa erey kasta loola jeedo.
Xaaladdan oo kale, TIN waa tan ereyo gaabin ah oo isku soo koobaya Sicirka Dulsaarka Magaca. Erayada Bangiga Isbaanishka, TIN waxaa loo fahmay sida "Marka muddada loo qoondeeyay xisaabinta iyo dejinta dulsaarku ay la jaanqaado qaabka muujinta dulsaarka, waxaa la isticmaalayaa dulsaar magac u yaal ah".
Si kastaba ha noqotee, qeexitaankan si fiican uma sharraxayo waxa ereygan loola jeedo. Si aad u fahanto, TIN waa lacagta qof kaa tago qayb ka mid ah caasimadiisa si ku meelgaar ah uu kuu waydiiyo "in ka badan". Tusaale ahaan, bangiga, waxay noqon doontaa dulsaarka ay ku gelinayso adiga oo amaah ku siinaya iyo inaad la laabaneyso inta ka hartay lacagta ay ku amaahday.
Fikradani had iyo jeer waa inay la xiriirtaa waqti (haddii aan la cayimin, markaa muddada wakhtigu waa sanadle). Caadi ahaan, waa boqolkiiba go'an oo lagu heshiiyey cidda amaahda lacagta, si aad si dhab ah u ogtahay taas, haddii aad weydiisato 100 euro, waa inaad soo celisaa 100 + TIN (oo noqon karta 5 euro, 2, 18…).
Sidee loo xisaabiyaa TIN
Xisaabinta TIN waa wax fudud oo aan ku lug lahayn wax dhibaato ah. Sidaa darteed, waxaan kuugu sharxeynaa tusaale. Ka soo qaad in aad dalbaneysid 100 euro (si loo fududeeyo) bangiguna wuxuu kuu sheegayaa, sababtaas awgeed, waxay kaa qaadi doontaa 25% ee TIN (adigoon cayimin waqti). Tani waxay ka dhigan tahay in 25% ay noqon doonto sanadle. Taasi waa, waa inaad soo noqotaa 100 + 25%, oo noqonaysa 125 euro.
Si kastaba ha noqotee, bishiiba ma bixin doontid waxa adiga kuu dhigma (8,33 euro) oo lagu daray 25% ee TIN, laakiin tan waa in loo qaybiyaa 12 lacag bixin bille ah (sannadka), taas oo kaaga dhigaysa tirada 8,33, 2,08 euro ( amaah) + XNUMX (TIN).
Xaqiiq ahaan, bangiyada waxay ku xisaabiyaan TIN-ga caanaha, si hadhow loogu dhejiyo alaabada ay bixiyaan. Kani waa:
TIN = Euribor + kala duwanaansho (kani waa midka bangigu dalbaday). Tani waa tan kuu horseedi doonta "qiimaha wax ku oolka ah ee badeecada", taas oo ah, waxa ay tahay inaad dhigto "dheeri" marka laga reebo waxaad weydiisato.
Waa maxay APR
APR dhab ahaantii waa Qiyaasta Sinnaanta Sanadlaha, erey aad u "hodan ah", maadaama ay ku jiraan xog kale oo badan (in ka badan TIN). Sida laga soo xigtay Bank of Spain, qeexitaanka lagu bixiyay tusahan waa sida soo socota: «APR waa tilmaan bixiya, qaab boqolkiiba sanadle ah, oo muujinaya kharashka wax ku oolka ah ama soo celinta sheyga maaliyadeed, maadaama ay kujirto dulsaarka iyo lacagaha bangiga iyo khidmadaha Si kale haddii loo dhigo, waxay kaga duwan tahay dulsaarka dulsaarka maadama aysan ku jirin kharashyada ama guddiyada; kaliya magdhawga uu ka helay milkiilaha lacagta si ku meel gaar ah u siiyay.
Si kale haddii loo dhigo, APR dhab ahaantii waa qiimaha wax ku oolka ah ee amaahda, oo laga arkay boqolkiiba caasimada amaahda. Intaas waxaa sii dheer, kuma jiraan dulsaarka la dalbaday oo keliya, laakiin sidoo kale muddada, guddiyada iyo kharashyada ka soo baxa amaahdaas. Taasi waa sababta loogu sheegay inuu macluumaad dheeri ah ka bixiyo.
APR waxay kujirtaa labadaba alaabada keydinta iyo alaabada amaahda, labadaba waxay sameysaa wax isku mid ah, taas oo ah, waxaa kujira oo kaliya dulsaarka magaca, laakiin sidoo kale gudiyada iyo kharashaadka laxiriira howlgalka laqabanayo.
Sidee APR loo xisaabiyaa
Marka la eego qaaciddada xisaabeed ee xisaabinta APR, tani way ka yara adag tahay tan TIN. Laakiin haddii aad rabto inaad isku daydo, halkan ayaannu kaaga tagnay adiga:
Qaacidadan, r wuxuu noqon doonaa heerka dulsaarka magacaaban (laakiin lagu muujiyey mid), halka f uu ​​yahay inta jeer (muddada), haddii ay tahay sanadle, saddexdii bilood, bille ...
Maxay ku kala duwan yihiin TIN iyo APR
Hadda oo aad waxoogaa ka cadahay fikradaha, waxaa laga yaabaa inaad ka fekerayso farqiga u dhexeeya labada, tan iyo, illaa iyo hadda, waxaad ogtahay oo keliya in TIN ay tahay erey bixiya xog ka yar APR.
Bangiga Isbaanishka laftiisa ayaa ku qasbay hay'adaha, tan iyo 1990, dhammaan hay'adaha maaliyadeed inay ku daabacaan APR dalabyadooda wax soo saar ee adeegsaday, si loo siiyo dhammaan macluumaadka ay tahay inuu qofku tixgeliyo ka hor inta uusan go'aan gaarin.
Laakiin, farqi aad u badan ayaa u dhexeeya TIN iyo APR? Aan aragno:
Qaabka loo xisaabiyo
Sidaad aragtay, habka loo xisaabiyo TIN iyo APR gebi ahaanba way ka duwan yihiin. Ma aha oo kaliya sababtoo ah qaaciddada xisaabeed ee laga yaabo inay ka adkaato ama ka yaraato, laakiin maxaa yeelay fikrado badan ayaa ka muuqda APR marka loo eego TIN. Sidaa darteed, wax walba waa inay ka muuqdaan xisaabinta tan, iyagoo isla markaa bixinaya, xog dheeri ah (iyo bixinta aragti caalami ah).
TIN, iyada oo ay ugu wacan tahay fikradeeda «fudud», runti waa tusmo macluumaad leh, tan iyo kama tarjumeyso xaqiiqda sheyga bangiga laftiisa. Tani waxay muujineysaa oo keliya tilmaame, laakiin maahan wax kasta oo kale oo saameyn ku leh natiijada kama dambaysta ah, sida kharashyada iyo guddiyada, wax ay sameeyaan APR. Sidaa awgeed, markay tahay wax soo saarka bangiyada, waa midda runtii annaga muhiim noo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Banca » Waa maxay TIN iyo APR
Waa maxay Bizum